कांग्रेसले भन्यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल
काठमाडौँ, ११ भदौ । नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतको राजकीय भ्रमण राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक रुपमा पूर्ण सफल भएको वताएका छन् । कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले निधिले आईतवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकारसम्मेलन आयोजना गरी प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुभएको...
भ्रमणको विषयमा एमाले टिप्पणी खोक्रो राष्ट्रवाद पौडेल
दमौली, ११ भदौ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर विपक्षी दल एमालेले विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफना् पार्टीको सभापति समेत रहेका प्रधनमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर एमाले र एमालको प्रचार संयन्त्रले राष्ट्रघात भयो भनेर भन्नु आफैमा...
पार्टीमा भद्रगोल भो'
तनहुँ, ११ भदौ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको कार्यशैली प्रतिथ रोष प्रकट गरेका छन् । आफनो गृह जिल्ला तनहुँमा संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दे पौडेलले भने हचुवा शैलीमा काम गर्ने परिपाटीले देशको पहिलो पार्टी शक्तिशाली बन्न नसकेको हो । कांग्रेस हालै सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावमा दोश्रो पार्टी वनेको प्रति...
नव्वे प्रतिशत न्यायाधिशले घुस खान्छन
काठमाण्डौं,१० भदौ/ माओवादीका सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायाण विडारीले अदालतमा ९० प्रतिशत न्यायाधिशले घुस खाने गरेको वताएका छन् । धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले ९० प्रतिशत घुस एजेन्टमार्फत जाने हुनाले फर्जी हुने र ९० प्रतिशत न्यायाधीशले नै घुस खाने गरेको आफ्नो अनुभव रहेको कार्यक्रममा सुनाए । यस अगाडि तत्कालिन प्र...
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल भयो-प्रचण्ड
काठमाण्डौं,भदौ १० गते । नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल रहेको बताएका छन । धनगढीमा प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको लागि विशेष जोड दिएको र नया कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै नेपालको जारी...
विरगञ्जमा राजपा कार्यकर्ताविच झडप,विमल श्रीवास्तव र राजेशमानसिह आमनेसाने
काठमाण्डौं,भदौ ९ गते । वीरगञ्जमा झडप भएको छ । चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको दोस्रो दिन नै राजपा कार्यकर्ता एक आपसमा मारामार गरेका हुन । वीरगञ्जमा शुक्रवार राजपाले स्थानीय तहको तेस्रो तहको चुनावको लागि उम्मेदवार तय गर्न वैठक डाकेको थियो । तर वैठक वस्ने हलको बाहिर मेयर पदका आकांक्षी विमल श्रीवास्तव र राजेशमान सिहका कार्यकर्ताविच झडप भएको...
केपी र कमललाइ आयो यस्तो चेतावनी !
काठमाण्डौं,भदौ ९ गते । प्रदेश नम्वर २ को चुनाव आउनै लाग्दा मधेशमा फेरि निषेधको राजनीति प्रारम्भ भएको छ । हालै संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विध्येक विपक्षमा मत हालेको भन्दै मधेश केन्द्रित दलले नेकपा एमाले र राप्रपालाइ मधेशमा निषेधको चर्को नारा लगाउन थालेका छन । कतिसम्म भने सप्तरीको मलेठमा ठुलो तुल नै टागेर एमाले र...
ओली वैंकक जाने
काठमाडौँ, ८ भदौ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नियमित स्वास्थ्य उपचार गराउनका लागि शुक्रबार थाइल्याण्ड जाँदै छन् । थाइ एयरवेजको विमानबाट शुक्रबार दिउँसो १ बजे नियमित स्वास्थ्य उपचारका लागि थाइल्याण्डस्थित बैंकक जान लागेका अध्यक्ष ओलीका स्वकीय सचिव अनिश दाहालले जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष ओलीका साथ धर्मपत्नी राधिका...
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय काँग्रेस पार्टीका अध्यक्ष गान्धीबीच भेट
नयाँदिल्ली, ८ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय काँग्रेस पार्टीका अध्यक्ष सोनिया गान्धीबीच आज भारतीय राष्ट्रपतिको कार्यालयमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटमा अध्यक्ष गान्धीले नेपालमा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले हालै नेपालको तराई भूभागमा आएको...
राजपाले अब सवै चुनावमा भाग लिने,चुनाव चिन्ह साइकल
काठमाण्डौं,भदौ ७ गते । मधेशी दल राजपाले अबका सवै दलले चुनावमा भाग लिने औपचारिक निर्णय गरेको छ । विहिवार राजपाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चुनावमा भाग लिने बताउदै अध्यक्षमण्डलका प्रमुख महन्थ ठाकुरले चुनाव चिन्हको बारेमा पनि बताए। उनले अब साइकल चुनाव चिन्ह लिने बताए । निर्वाचन आयोग संग छाता चुनाव चिन्ह मागिरहेको राजपाले साइकलमा चित्त...
किन पाए देउवाले न्यानो आतिथ्यता ?
काठमाण्डौं,८ भदौ /नेपालका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले भारतको भूमिमा टेक्ने वित्तिकै विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले स्वागत गर्दे गरेको फोटोलाई सञ्चारमाध्यमहरुले भाईरल वनाएका छन् ,उक्त फोटोको क्याप्सन लेख्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश कुमारले टिवट गर्दे लेखे निकटको छिमेकीलाई विशेष स्वागत । भारत भ्रमणमा रहेका...
आर्थिक विकासमा साझेदार हुन दुई देश सहमत
एकराज पाठक,नयाँदिल्ली, ८ भदौ । भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल भारतको छिमेकी मात्र नभएर एक असल मित्र पनि भएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आज नयाँ दिल्लीको हैदरावाद भवनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो । भारत भ्रमणका क्रममा आजै दुई...
कार्यवाहक सभापतिमा निधी
काठमाडौं भदौ ८ / नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता विमलेन्द्र निधि पार्टीको कार्यवाहक सभापति दिएर विदेश भ्रमणमा निस्कीएका छन् । यस अगाडि पुष्पकमल दाहालको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका निधीलाई एकाएक पार्टीको कार्यवाहक सभापति दिएपछि नेपाली कँंग्रेस भित्र हंगामा भएकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर...
एकराज पाठक/नयाँ दिल्ली, ७ भदौ । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बुधबार साँझ नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ । उहाँहरुबीच भएको यस भेटलाई भोलि हुने औपचारिक भेटघाट र वार्ताको पूर्व तयारीका रुपमा लिइएको छ । अनौपचारिक रुपमा भएको उक्त भेटवार्तालाई प्रधानमन्त्री...
यसकारण देउवा र मोदीविच आजै भेट भयो
काठमाण्डौं,भदौ ७ गते । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविच वुधवार नै भेट भएको छ । विहिवार दुइ नेताविच भेट हुने औपचारिक कार्यक्रम थियो तर वुधवार नै उनीहरुविच संक्षिप्त भेट भयो । अनौठो चाहि के भयो भने यी दुइ नेता विच भेट भएको खवर तब मात्र सार्वजनिक भयो जब मोदीले टिवट गर्दै देउवालाइ भेटेर खुशी लागेको कुरा...